Waxaa magaalada Toronto lagu soo gaba gabeeyay tartan kubadda cagta ah ee la magac baxay
North American Youth Challenge Cup.
Tartankani ayaa sannadkiiba bisha December 25-26 lagu qabtaa Toronto, iyada uu soo qaban qaabiyo Muhiyadin Nur oo ku magac dheer Diinay.
Tartankan oo ay kasoo qeyb galeen 9 kooxood ayaa ciyaarta kama dambeynta Final waxaa isaga hor yimid Kitchener Junior iyo Hamilton.
Hamilton oo dhulka lagu jiiday: Ciyaartani finalka ayaa ku bilaabantay jawi aad u qurux badan oo ay aad ula dhaceen dadweynihii kasoo qeyb galay.
Kooxda Kithener ayaa bilowgii ciyaartaba weerar aan kala go' lahayn ku qaaday goolka Hamilton taasi oo keentay in daqiiqado yar gudaheeda ay Kitchener dhalisay 2 gool oo daran doori ah.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2-0 oo ay ku hogaamineyso Kitchener.
Qeybtii labaad markii la bilaabay ayaa haddan goolkii 3aad oo aad u qurux badnaa lagaga naxsaday Hamilton.
Dhamaadkii ciyaarta ayaa kooxda Hamilton goolka Kitchener hortiisa loo dhigay laad xor ah. Ciyaartooyda Kitchener oo isa sii diyaarinaya ayaa si lama filaan ah loogu soo laaday kubadda, sidaana goolka kaga dhashay.
Ciyaartani ayaa waxay ku dhamaatay 3-1 oo ay Kitchener si fiican dhulka ugu jiiday Hamilton , sidaana ku qaadatay North American Youth Challenge Cup 2015.
U12 & U14 North American Youth Challenge Cup 2015.
Dhanka kale waxaa iyaguna laba koob loo dhigay ciyaartooyda ay da'dooda ka hooseyso 12 jir "U12" iyo kuwa 14 jirka ka yar "U14".
Koobkii U12 waxaa ciyaarta Finalka wada ciyaaray kooxda Muqdisho Fc iyo Xiddigaha Fc oo iyadu difaacaneysay koobkan, iyadoo sannadkii 2014 ay ku guuleysatay kadib markii ay Kooxda Semcy ka badisay.
Labadan kooxood ee da'da yar ayaa soo bandhigay ciyaar aad u xiiso badan islamarkaana ay ku dheehan tahay asluub.
Wixii labadan kooxoodba ay weerar iyo weerar celin isku hayaan, ugu dambeyntii waxay ciyaarta kusoo gaba gabowday 4-1 oo ay guusha ku raacday Xiddigaha fc sidaan sannadkii labaad ku qaatay U12 North American Youth Challenge Cup 2015.
Sidoo kale kooxda Xiddigaha waxay la hooyatay koobkii U14 North American Youth Challenge Cup 2015.
Waxaa xusid mudan in dhamaadkii ciyaarta aad arkeysay ciyaartooyda iyo tababareyaasha kooxahan oo wada qoslaya, isna salaamaya taasi waxay ku tuseysaa in tababareyaashani ay fahmeen ulajeeda ciyaartani oo ah is dhexgalka caruurta ee aanu ahayn guul iyo guul darro un in la eego. Waxaanu leenahay Hambalyo.